Deni oo shaaciyay xudunta Khilaafka Puntland iyo DF | KEYDMEDIA ONLINE
Deni oo shaaciyay xudunta Khilaafka Puntland iyo DF
Isagoo wareysi siinayay Universal TV ayuu sheegay Deni in maamulka Puntland uu wadashaqeyn dhaw la leeyahay hay'adaha kale ee dowladda Federaalka marka laga reebo xafiiska Farmaajo.
GAROOWE, Puntland - Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa sheegay in maamulkiisa uusan khilaaf gaar ah kala dhaxeynin dowladda Federaalka, balse uu diidan yahay oo kaliya nidaamka siyaasadeed ee Farmaajo ku maamulayo dalka Soomaaliya.
Deni ayaa carabka ku dhuftay in Puntland aysan doonaynin wadanka burburkiisa inay qeyb ka noqoto oo Farmaajo ku taageerto siyaasaddiisa gurracan, ee jidka qarda-jeexa ku socota, taasoo hadii aan laga hortagin laga dhaxli doono dagaal sokeeye.
Siyaasadda Farmaajo ee Puntland ay kasoo horjeedo waa nidaamka maamulka doorashadda dalka, oo gudiyada la magacaabey dhaliileen mucaaradka iyo qancin la'aanta Axmed Madoobe iyo Cabdi Xaashi.
Madaxweynaha Puntland waxuu usoo jeediyay Farmaajo inuu xafiiska ka tago isagoo sharaftiisa dhowrsan tahay, oo dhaxal wanaagsan u reebayo dalka iyo dadka, taaoo uu ku heli karo taageerada shacabka hadii uu doorasho loo dhan yahay qabto.
Puntland oo ku faanta inay tahay hooyada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay qabiil kula safatay Axmed Madoobe, islamarkaana u doodayso dano aan khuseyn, oo ay kamid tahay arinta Gedo, oo Deni shuruud uga dhigay Farmaajo inuu kasoo saaro Ciidanka, si loo sii wado wadahadalka doorashadda.